Featured – စာမကျြနှာ 131 – Healthy Life Journal
ကျော်ကြားသူတို့၏ ကျန်းမာလှပ လူမှုဘ၀ ပိုပို
တစ်နေ့တာ အသားရေ ထိန်းသိမ်းမှုပုံစံ ညတိုင်း အိပ်ခါနီး မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ Skin-Care ကို နေ့တိုင်းသုံးတယ်၊ ပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်သီး များများစားတယ်၊ တစ်ခါတလေ အသားအရေအတွက် အထောက်အကူ အကျိုးရှိစေမယ့် အစားအသောက် အသီးအနှံတွေ စားပါတယ်။ အသားအရေအတွက် နေ့တိုင်း ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်တာကတော့...
အများပြည်သူ ကျန်းမာဖို့ရာ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ တန်ဖိုးသင့် ညစာ . .
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အင်္ဂပူမြို့နယ်က မြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒ၀င်း၏ “တန်ဖိုးသင့် ညစာ” ဆိုလျှင် မကြားဖူးသူ ရှားပေလိမ့်မည်။ ၁၉-၄-၂၀၁၅ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သည့် အာဟာရ ပြည့်ဝ တန်ဖိုးသင့်ညစာကို စတင်ရောင်းချပေးခဲ့သော ဒေါက်တာနန္ဒ၀င်းသည် ကိုယ်တာဝန်ကျသည့် နေရာတွင်...
ဆေးကျောင်းသား အဖြစ်မှ ဆရာဝန်၊ ဆရာဝန် အဖြစ်မှ အထူးကုဆရာဝန် စသဖြင့် ကုသရေးဆိုင်ရာ ပါမောက္ခရာထူးအထိ အဆင့်ဆင့် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ရသော ဆရာဝန်ကြီးတို့၏ ဘ၀သည် လွယ်ကူ ချောမွေ့စွာ ဖြတ်သန်းနေရခြင်း မဟုတ်။ အထူးသဖြင့် ယခုအချိန်အထိ လူနာများစွာကို ကျန်းမာရေး...
ဖိုးထူးကို ရှာကြပါ . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းကျော် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပြောကြားသည် ဖိုးထူးဟာ အလုပ်မှာ စိတ်ညစ်လို့ လျှောက်သွားခဲ့တယ်။ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်သွားရင်း ညကြီး အချိန်မတော်မှာ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရောက်သွားတော့ အဲဒီဆိုင်ကို ဖိုးထူးက အရင် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ ထိုင်နေကျ ဆိုင်ဖြစ်တော့...
သွေးချိုကျရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ . . .
ပါမောက္ခဒေါ်သန်းသန်းအေး ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး သွေးချိုအကျလွန်တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုအကြောင်းကို စာဖတ်သူတွေ မှတ်မိနားလည်စေဖို့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါက အသက် ၇၀ အရွယ်လူနာ ဦးတင်ရွှေဟာ သတိလစ်ပြီး အိပ်ပျော်သလိုဖြစ်နေတာ တစ်ရက်နီးပါး ရှိသွားတဲ့အတွက် သမီးဖြစ်သူမပြုံးက အရေးပေါ်အနေနဲ့...
သင့်ကလေး ထက်မြက်၊ အောင်မြင်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင်နည်း ၆
ပါမောက္ခဒေါက်တာနီလာကြူ (စိတ်ပညာရှင်ပါမောက္ခ ဌာနမှူး စိတ်ပညာဌာန ရန်ကုန်နှင့်တွေ့စုံဆွေးနွေးခြင်း) တချို့မိဘတွေက လူကြီးချင်းတွေ့တဲ့အခါ ကလေးတွေရှေ့မှာ ကလေးဆိုးကြောင်း ပြောလေ့ရှိကြပါတယ်။ အဲဒါက ကလေးတွေအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိတတ်ပါသလဲ ဆရာမ။ တချို့မိဘတွေက ကလေးမှာ အပြစ်ရှိလို့ အပြစ်ပေးတာပဲဆိုပြီး အပြစ်ပေးတာတွေ လုပ်တယ်၊ မှန်တာပြောတာပဲဆိုပြီး...
ကလေးကို ကျောင်းထားတော့မည် ဆိုလျှင် . . .
၊ မီမိုး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ကလေးကို ကျောင်းထားတော့မယ်ဆိုရင် မိဘတွေက ကျောပိုးအိတ်အသစ် ၀ယ်ပေးတာ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ပေးတာ၊ ကျောင်းဝတ်စုံအသစ် ၀ယ်ပေးတာတို့ လုပ်ပြီး ပြင်ဆင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေအပြင် ကလေးကို ကျောင်းမထားခင်မှာ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် စောင့်ရှောက်မှုတွေ...
သူငယ်ချင်း လေးယောက် ရှိလေသည် . .
၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊ ရွာတစ်ရွာမှာ သူငယ်ချင်းလေးဦး ရှိပါတယ်။ သူတို့ လေးဦးထဲက သုံးယောက်က အလွန်တော်ပြီး အရာရာကို စူးစမ်းလေ့လာမှု ရှိကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့သူငယ်ချင်း ကိုကျော်ကတော့ ပျင်းရိပြီး လေးလံလွန်းလှတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူ့မှာ လက်တွေ့ကျကျ...
ပါမောက္ခ ဒေါ်သန်းသန်းအေး ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ယခင်တစ်ပတ်မှအဆက် သွေးချိုမြင့်မားတာကြောင့် ရရှိတဲ့ ဆိုးကျိုးက ပိုအတွေ့များတယ်၊ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြစ်တယ်၊ သူ့ကြောင့်ဖြစ်မှန်းတောင် မသိကြတဲ့သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒါက”အနှေးလူသတ်သမား”ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား တစ်ဖက်မှာလည်း သွေးချိုအကျလွန်တဲ့ ဆိုးကျိုးဟာ အဖြစ်နည်းပေမယ့်...
မာရီလင်မွန်ရိုးကဲ့သို့ လှပချင်သူတို့အတွက် သူ့မိတ်ကပ်ပညာရှင်ပြောသော လျှို့ဝှက်ချက် ရှစ်ရပ်
လရိပ်မေ နီနီရဲရဲနှုတ်ခမ်းဖူးတစ်စုံ၊ ရွှန်းစိုကော့လက်နေတဲ့ မျက်တောင်၊ တောက်ပကြည်လင်တဲ့ အသားအရေ စတာတွေနဲ့ လှပတဲ့ မာရီလင်မွန်ရိုးကို အားကျသူ အများကြီး ရှိမှာပါ။ မွန်ရိုးလို လှချင်တဲ့ သူတွေအတွက် သူ့မိတ်ကပ်ပညာရှင် ပြောပြထားတဲ့ မွန်ရိုးရဲ့ အလှအပ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ (၁)...